ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ coronavirus လူနာသည်ရက်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ခြင်းမရှိသေးပါ - New York Times - TELES RELAY
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Coronavirus လူနာကို New York Times ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ coronavirus လူနာတစ် ဦး သည်ဆရာ ၀ န်များ၏အကြံပြုချက်များအရတင်းကြပ်သောဖယ်ဒရယ်စံသတ်မှတ်ချက်များကြောင့်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ရက်ပေါင်းများစွာစောင့်ခဲ့ရသည်။
CDC အာဏာပိုင်များကလူနာသည်ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်ပြန်လည်ပတ်သောခရီးသွားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ရောဂါအသစ်သည်ကူးစက်နိုင်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုမသိသောကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်သည်ရပ်ရွာအတွင်းကူးစက်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်စလုံးမှ coronavirus ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်အစိုးရ၏တုန့်ပြန်မှုနှေးကွေးနေခြင်းအပေါ်တွင်သမ္မတ Trump သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဒုသမ္မတ Mike Pence အားခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အစိုးရ၏တုန့်ပြန်မှုကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်အမေရိကန်သည်ယေဘူယျကပ်ရောဂါတစ်ခု၏အကြိမ်ကြိမ်လျှော့ချခဲ့သော်လည်း၊
"အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်စွန့်စားရမှုကအရမ်းနည်းနေသေးတယ်။ "ကျနော်တို့မှာဒီမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။ "
ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2020 ရက်တွင် updated
၎င်းသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်မှပေါ်ထွက်လာသောသရဖူပုံသဏ္spာန်ဖြစ်သောကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Coronavirus သည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူများကိုရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများအကွာအဝေး အအေးမိမှပြင်းထန်သောစူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါသို့မဟုတ် SARS ကဲ့သို့သော ပို၍ အန္တရာယ်များသောအခြေအနေများအထိ။
အဆိုပါ CDC ရှိပါတယ် အဟောင်းနှင့်မှာ - အန္တရာယ်ခရီးသွားများအတွက်သတိပေးခဲ့သည် ဂျပန်, အီတလီနှင့်အီရန်ကိုရှောင်ရှားရန်။ တောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်သို့သွားရန်မလိုအပ်သောခရီးများကိုလည်းတားမြစ်ထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Wuhan မှစတင်ဖြစ်ပွားသောဗိုင်းရပ်စ်သည်လူ ၈၀,၀၀၀ ကျော်အားဖျားနာစေခဲ့သည် အနည်းဆုံးနိုင်ငံပေါင်း ၃၃ နိုင်ငံအီတလီ၊ အီရန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့ပါဝင်သည်။
ပဏာမသုတေသနအရ, ဒါဟာအတန်အသင့်ကူးစက်ပုံရသည်, SARS ဆင်တူ, နှာချေခြင်း, ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမျက်နှာပြင်များကပြန့်နှံ့ဖွယ်ရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များကရောဂါကူးစက်ခံရသူတစ် ဦး လျှင် ၁.၅ မှ ၃.၅ ယောက်အထိထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲကူးစက်နိုင်သည်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအရာရှိများနှင့်လက်တွဲပြီးတိုးတက်မှုနှေးကွေးခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအပတ်တွင်အတည်ပြုပြီးသောအဖြစ်အပျက်များသည်တိုက်ကြီး (၂) ခုတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကသတိပေးပြောကြားခဲ့သည် အဓိကကပ်ရောဂါတစ်ခုအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ.
CDC အရာရှိများသည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသော်လည်းရပ်ရွာအခြေပြု coronavirus ကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်ချေကိုမဖော်ပြထားပါ။
သို့သော်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သောဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီသည်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှသာစစ်ဆေးမှုကိုမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အမှုကအေဂျင်စီ၏ကျဉ်းမြောင်းသောစစ်ဆေးမှုစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းတက္ကသိုလ်အရာရှိများကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းဝင်းမှ။
CDC သည်မကြာသေးမီကတရုတ်သို့ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးသူများသို့မဟုတ် coronavirus ကူးစက်ခံထားရသူနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ကိုသိသောလူနာများအတွက်စမ်းသပ်မှုအကန့်အသတ်ရှိသည်။
မှတ်ချက်ပေးရန် CDC အားချက်ချင်း ဆက်သွယ်၍ မရပါ
[Facebook ပေါ်မှာ Science Times စာမျက်နှာလိုပဲ။ | စာရင်းသွင်းပါ Science Times သတင်းလွှာ]
"ဝန်ခံချက်အရငါတို့အဖွဲ့ကဒီရောဂါဟာ Covid-19 ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကိုမေးတယ်" ဟုစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဆေးကုသမှုဌာနမှ CDC မှစစ်ဆေးမှုများကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ “ လူနာသည် Covid-19 အတွက် CDC စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်စစ်ဆေးမှုကိုချက်ချင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ UC Davis Health သည်စစ်ဆေးမှုကိုမထိန်းချုပ်ပါ။ "
လူနာသစ်နှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သိထားသော coronavirus ကူးစက်မှုအရေအတွက် ၆၀ ရှိပြီး၊ ၄၅ ခုတွင်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ဗဟိုအချက်အချာကျသောတရုတ် - Wuhan မှကူးစက်ခံထားရသောအမေရိကန်လူမျိုး ၄၅ ဦး နှင့်သင်္ဘော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ quarantine ပြီးနောက်လွှမ်းမိုးထားသော Diamond Princess သင်္ဘော။
ယခုအချိန်အထိပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတာ ၀ န်ရှိသူများသည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိကူးစက်မှုများအားလုံးကိုမကြာသေးမီကပြည်ပသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူသိများသောလူနာများအထိခြေရာခံနိုင်ခဲ့ပြီးထိတွေ့မှုရင်းမြစ်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအထူးကုဒေါက်တာဝီလျံရှာဖနာက“ ဒီလူကိုဘေးဒဏ်သင့်တဲ့တိုင်းပြည်ကလူတစ်ယောက်နဲ့တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်မရှိတာကငါတို့အားလုံးကိုမသက်မသာဖြစ်စေတယ်။ ဗန်ဒါဘစ်လ်တက္ကသိုလ်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတာ ၀ န်ရှိသူများကရောဂါကူးစက်ခံရသူသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ စလိုနိုကောင်တီတွင်နေထိုင်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်းလူနာ၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ။
Roblox နှင့်တုံ့ပြန်မှုဗီဒီယို combo? ထိပ်ဖျား: (အဖြေမှာဟုတ်သည်) // OptimizeGaming - VIDEO - TELES RELAY
ကနေဒါ - ဘီစီငွေကြေးခ ၀ ါချမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်သည် 'ဆီးနှင်းကျခြင်း' ကိုအဆုံးသတ်ရန်မူဝါဒအသစ်များလိုအပ်သည်